Lagdankii Lammaanayaasha! | Keydmedia
Cabdicasiis M. Shidane — Nolasha lammaanuhu, waa nolal ku dhisan wax wada qabsi iyo is faham, iskaashi iyo is garabsiin, iyo in wax la wada dhisto. Ma aha milkiyad iyo cabiidsi, sida ay ku fakaraan rag badan oo maanta ku nool dunida dacalladeeda, gaar ahaan, kuwooda ka soo jeeda bulshooyinka dib jirka ah, siiba anaga, ee nolasha si qallafsan u fahamy.
Waxaa dhaqan iyo diin ahaan qoran soona arooray in ninku xaaskiisa qoryaha dabka lagu shito u soo guri jiray, dharkana u dhaqi jiray, biyahana u soo aroori jiray, maanta waxaa jirta nolal ka sahlan tii waagaas jirtay, balse, ka fool xun kana wal wal badan tii hore.
Maanta wiilka Afrikaanka ah ama Muslimka ah, waxaa la barayaa qaabkii uu ula dhaqmi lahaay lammaantiisa, una caawin lahaay xaskiisa, kaaga darane, qaar ayaa waxaa la barayaa qaabkii uu ugu galmoon lahaay afadiisa, iyo sida uu naxariis u tusi lahaay markii ay xanuunsan tahay, ama ay uur leedahay, waxaad la sii fajacaysaa wiilka sidaas u dhaqmaya waxuu ku faanayaa dhaqan, diin iyo dhul ilbaxnimo wayn leh, nolashiisana ma maaraynkaro.
Furriin iyo qoysas burburaya ayaan maalin kasta maqalnaa, badanaa, waxaa ugu wacan ninka Soomaaliga ah ee is ka dhaadhacsiiya in uu yahay ninka iska leh guriga iyo gabadha uu la noolyahay (MILKIYAD).